Maitiro ekuisa watermark pamufananidzo nefoni uye PC, Emulator.online ▷ 🥇
Kuisa watermark pamufananidzo inzira yekubatanidza zita rako kana bhizinesi kumufananidzo. Parizvino, pane akati wandei zvirongwa uye zvinoshandiswa zvinobvumidza iwe kuisa logo yako, kungave pafoni yako kana paPC yako, mune mashoma matanho. Tarisa uone zviri nyore.
Kuisa watermark pane pikicha pafoni yako, ngatishandise iyo PicsArt app. Pamusoro pekusununguka, zvinokutendera kuti ushandise zvese mufananidzo uye zvinyorwa, nenzira yakasarudzika. Naizvozvo, usati watevera nhanho nhanho, zvakafanira kurodha kunyorera pane yako Android kana iPhone chishandiso.
1. Vhura PicsArt uye gadzira account kana pinda neako Gmail kana Facebook mushandisi data;
Kana iwe ukaitika kuti uone zano rekunyorera kuapp, tinya iyo X, inowanzo kuve iri pamusoro pechidzitiro kuti ivhare kushambadza. Sarudzo yekuisa watermark inowanikwa kubva kune zviwanikwa zvemahara zvebasa.
2. Pachikona chepamusha, bata iyo + kutanga;
3. Bata mufananidzo paunoda kuisa watermark kuti uisarudze. Kana usiri kuzviona, enda ku Mifananidzo yese kuona ese mafoto anowanikwa pane chako chishandiso;
4. Dhonza bharaki repasi pazasi pemufananidzo kuti uone mabasa ese. Ndakabata Text;
5. Wobva wanyora zita rako kana rekambani yako. Tinya pikicha yekutarisa (✔) kana wapedza;
6. Usati watanga kugadzirisa, isa zvinyorwa munzvimbo yaunoda. Kuti uite izvi, bata uye udhonze iro bhokisi remavara.
Izvo zvakare zvinokwanisika kuwedzera kana kudzikisira iwo mameseji bhokisi uye, nekudaro, iyo tsamba, nekubata uye kudhonza pamadenderedzwa anoonekwa pamipendero yayo;
7. Iye zvino, unofanirwa kushandisa maturusi ekugadzirisa zvinyorwa kuti usiye watermark sezvaunoda. Izvi zvinotevera zviwanikwa zviripo:
Fuente: Inopa zvitaera zvakasiyana zvetsamba. Paunobata chero, chinoiswa kumavara akaiswa mumufananidzo;
VaK: Sekureva kwezita, rinokutendera kuti uchinje ruvara rwe tsamba. Tarisa kuti munguva pfupi, kuchine sarudzo dzekuisa gradient uye magadzirirwo;
Borde: inokutendera iwe kuisa muganho pane tsamba uye sarudza ukobvu hwayo (mubhawa Nhamba);
Opacity: chinja kujekesa kwechinyorwa. Ichi chinhu chakakosha kuitira kuti watermark iiswe nenzira isinganetsi, pasina kukanganisa maonero emufananidzo;
Sombra: basa kuisa tsamba shading. Iyo inobvumidza kusarudza muvara weiyo shading, pamwe nekugadzirisa iko kusimba uye chinzvimbo;
Bueno: inoisa curvature mushoko kana mutsara, zvinoenderana nekona inotsanangurwa mubhawa Kupeta. Zvichienderana nerudzi rwebhizinesi rauinaro, iwe unogona kupa rako rechiratidzo kusununguka kwekubata.
8. Mushure mekugadzirisa, enda kune cheki icon (✔) mukona yepamusoro yekona yekona;
9. Kuti uchengetedze mhedzisiro, tinya museve icon mukona yepamusoro kurudyi;
10. Pachirongwa chinotevera, enda ku Save uyezve mukati Sevha kune yako kifaa. Mufananidzo wacho unozochengetwa mu Garari kana Raibhurari ye smartphone yako.
Isa mufananidzo se watermark
PicsArt zvakare inokutendera iwe kuti uise yako icon yekambani pane kungo nyora zita rako rechiratidzo. Kuti uite izvi, iwe kutanga unofanirwa kuve neyako logo mufananidzo muJPG mune iyo gallery o Library Nharembozha.
Saka ingo tevera iyo nhanho 1 kusvika ku3, yakaratidzwa pamusoro. Ipapo, pane yetireyi tireyi, tinya A. Mufananidzo. Sarudza iyo yaunoda faira uye simbisa mu Wedzera.
Sezvakaita zvinyorwa, iwe unogona kugadzirisa chinzvimbo uye zviyero zvemufananidzo wakaiswa nekutepa uye kudhonza. Kuti uwane saizi uchichengetedza huwandu, tinokurudzira kuti usarudze iyo yemusoro-misoro museve icon.
Kuiswa iyo logo, enda kune iyo sarudzo Opacity, inowanikwa pazasi kwekona. Deredza kuti ive yakajeka kuitira kuti irege kukanganisa mufananidzo mukuru, asi ichiri kuoneka. Pedzisa maitiro neikisheni icon (✔) pamusoro pekona kurudyi.
Kuti uchengetedze mhedzisiro, tinya museve icon mukona yekumusoro kurudyi uye pane inotevera skrini enda ku Save. Simbisa sarudzo mukati Sevha kune yako kifaa.
Muchidzidzo chinotevera, isu tinoshandisa iyo iLoveIMG webhusaiti. Iyo sevhisi inobvumidza kuisa watermark mune zvese mifananidzo uye zvinyorwa, pamwe nekugadzirisa saizi uye opacity. Mushandisi anogona zvakare kuisa mhando mapikicha akawanda panguva imwe chete.
1. Vhura iyo browser yesarudzo yako uye usvike iyo iLoveIMG watermark chishandiso;
2. Dzvanya pane bhatani Sarudza mifananidzo uye sarudza mufananidzo waunoda kuisa watermark pakombuta yako;
3. Maitiro ekuisa watermark mumifananidzo uye zvinyorwa zvakafanana:
A) Mumufananidzo: kana iwe uchida kuisa chifananidzo senge logo yekambani yako, tinya Wedzera Image. Wobva wasarudza mufananidzo paPC yako.
CHEPIRI) Muchinyorwa: tinya pa Wedzera mavara. Nyora iwo mavara aunoda, senge zita rako kana zita rako. Iwe unogona kugadzirisa zvinotevera zvinhu zvemashoko:
Fuente- Kudzvanya Arial inoratidza zvimwe zvingasarudzwa;
Talla: inowanikwa mune icon ine mavara maviri T (Tt);
Chimiro: ushingi font (yechipiri), italiki (yo) uye tara (U);
Ruvara rwekuseri: kudzvanya pane pende bhaketi icon;
Tsamba yemavara uye zororo: inowanikwa nekudzvanya tsamba icon UN
Kuumbwa: mune iyo icon yakaumbwa nemitsara mitatu, zvinokwanisika kuisa kana kururamisa iwo mavara.
4. Wobva waisa mufananidzo kana chinyorwa bhokisi munzvimbo yaunoda nekudzvanya nekukweva. Kuti urebe saizi, ingotinya pane madenderedzwa ari kumucheto uye dhonza;
5. Kuti ugadzirise kupenya, tinya pikicha icon ine zvikwere mukati. Bhawa ichaonekwa paunogona kuwedzera kana kudzikisa padanho rekujekesa;
6. Kana iwe uchida kuisa iyo yakafanana watermark pane mimwe mifananidzo, tinya iyo +, kurudyi kwemufananidzo. Wobva wasarudza mimwe mifananidzo paPC yako;
Iwe unogona kudzvanya pane yega yega kuti uone kuti Anwendung anotaridzika sei uye kugadzirisa ega, kana zvichidikanwa.
7. Dzvanya pane bhatani Watermark mifananidzo;
8. Dhawunirodha faira racho pa Dhawunirodha mifananidzo ine watermark. Kana iwe waisa watermark pamifananidzo yakawanda panguva imwe chete, ivo vanozotorwa kune faira mune .zip fomati.
Kana iwe uchida kushanda isingaenderani uye usingade kubhadhara kune yekugadzirisa application, unogona kushandisa Paint 3D. Chirongwa chinozvarwa paWindows 10. Kana iwe uine iyi vhezheni yesystem yakaiswa pakombuta yako, pamwe iwe une software zvakare.
Kusiyana nesarudzo dzakapfuura, hazviite kuti uchinje opacity. Saka kana iwe uchida mhedzisiro isinganetsi, zvingave zvirinani kushandisa mimwe mhinduro dzakaratidzwa pamusoro.
1. Vhura Paint 3D;
2. tinya pa Menyu;
3. Wobva waenda Isa uye sarudza pikicha iyo iwe yaunoda kuisa watermark;
4. Nemufananidzo wakavhurwa muchirongwa, tinya Text;
5. Dzvanya pamufananidzo uye nyora watermark zvinyorwa. Mukona yekurudyi yechiratidziri, iwe uchaona izvo zvisarudzo zviripo zvemavara basa Kuti uashandise, tanga wasarudza iwo mavara negonzo.
3D kana 2D zvinyorwa- Izvo zvinongo gadzira mutsauko kana uchizoshandisa iyo 3D View kana yakasanganiswa Reality basa;
Rudzi rwemhando, saizi uye ruvara;
Chinyorwa chimiro: kushinga (N), italic (yo) uye tara (S)
Background zadza- Kana iwe uchida kuti iwo mavara ave neakara kumashure Mune ino kesi, iwe unofanirwa kusarudza mumvuri unodiwa mubhokisi riri padyo nawo.
6. Kuti uise iwo mavara kwaunoda iwe, tinya uye udhonze iro bhokisi. Kuti usimbise bhokisi remavara, tinya uye dhonza nzvimbo dziri pamuganhu;
7. Paunodzvanya kunze kwebhokisi remavara kana kudzvanya iyo yekupinda kiyi, iwo mavara akagadziriswa paakaiswa uye haachakwanise kugadziriswa;
8. Kuti upedze, tevera nzira: Menyu → Sevha se → Mufananidzo. Sarudza fomati iyo iwe yaunoda kusevha uye kupedzisa nayo Chengetedza.
Kana iwe uchida kushandisa yako kambani logo, ingoita iyo nhanho 1, 2 uye 3 uye wozozvidzokorora, asi panguva ino, kuvhura iyo logo mufananidzo. Wobva wangoita zvigadziriso zvinoratidzwa mu Nhanho 6 uye chengeta, sezvakaratidzwa mu Nhanho 8.
Maitiro ekugadzira tsamba dzemusoro muShoko
Iwo akanakisa emahara evhidhiyo edhita efoni nhare
'Photoshop' Pamhepo: Yakanakisa Yemahara Yemafoto Edhi Dzimwe nzira